Amafomu esicelo semali yomhlalaphan
WUma ilungu liyeka ukusebenza kumasipala ngenxa yokusheshe lithathe umhlalaphansi/umhlalaphansi ojwayelekile, ukuphela komsebenzi noma ngenxa yokugula, lama fomu esicelo semali alandelayo kufanele agcwaliswe bese ethunyelwa eSikhwameni ukuze ilungu lithole umhlomulo. La maphepha alandelayo ayodingeka ehambisana namafomu esicelo semali selungu:
Isitatimende sasebhange esinesigxivizo sasebhange
Inombolo yentela (Tax reference number)
Ikhophi ye-ID egxiviziwe yaqinisekiswa
I-Fomu D uma kuphele umsebenzi/umhlalaphansi
Uma kungekho okunye kwala maphepha, kungadala ukubambezeleka ekukhokweni komhlomulo.
NJMPF Claim Form Retirement
Amafomu abahola impesheni
Ukugcwaliswa nokuhanjiswa kwamafomu obufakazi bokuthi ohola impesheni usaphila kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa iSikhwama ngobufakazi bokuthi ohola impesheni usaphila. Yisona isizathu lesi iSikhwama sigcizelela ekulethweni kwefomu yobufakazi esayinwe phambi kwe-Commissioner of Oaths (onezibophezelo ezithile zokuqinisekisa ukuthi okuphambi kwayo (Commissioner of Oaths) kuyikona futhi kuyiqiniso. Lokhu kusiza futhi ukuvikela izicelo eziyinkohlakalo lapho ohola impesheni eseshonile bese kuthi umuntu wesithathu aqhubeke ahole impesheni yalowo oshonile. Amafomu obufakazi athunyelwa ngeposi kanye ngonyaka ngenyanga yokuzalwa kwalowo ohola impesheni. La mafomu kufanele abuyiswe ingakapheli inyanga emva kosuku lokuzalwa lwelunga. Ukuhluleka ukwenza lokhu kuyoholela ekumisweni kokukhokhwa kwempesheni. Ukugcwaliswa kwamafomu kungenziwa ngosizo lwabasebenzi bethu base-Client Services.
Amafomu kufanele agcwaliswe kusetshenziswa imininingwane esemisha yomuntu, ikakhulukazi izinombolo zikamakhalekhukhwini ukuze kuxhunywane nge-sms, ikheli lendawo yokuhlala kanye nekheli le-email.
Kufanele kunanyathiselwe ikhophi ye-ID esanda kugxivizwa
Kudingeka isitembu se-Commissioner of Oaths.
Uma impesheni yakho imisiwe, qinisekisa ukuthi uhambisa eSikhwameni ifomu lakho eligcwalisiwe eliwubufakazi bokuthi uyaphila ngosuku lweshumi enyangeni elandelayo. Iyoba isiyabuyiswa impesheni yakho ekupheleni kwaleyo nyanga.
Amafomu abafundi athunyelwa ngeposi kanye ekuqaleni konyaka kulezo zingane ezivumelekile ukuthola umhlomulo walowo oshonile futhi zithola impesheni yanyangazonke eSikhwameni se-Superannuation. La mafomu asetshenziselwa ukuqinisekisa ubufakazi bokufunda kanti kufanele abuyiselwe esikhwameni ngokushesha. Ukuhluleka ukukwenza lokhu kungaholela ekumisweni kokukhokhwa kwemali yempesheni. Ukugcwaliswa kwamafomu kungenziwa futhi nasemahhovisi eSikhwama ngokusizwa abasebenzi base- Client Services.
Amafomu kufanele agcwaliswe ngokuphelele abe nesitembu sesikole noma isitembu sesikhungo semfundo ephakeme kanye nemininingwane yokuxhumana.
Ulwazi kwabahola impesheni